Ny drafitra vaovaon'ny SriLankan Airlines ho tahaka ny Emirates
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny drafitra vaovaon'ny SriLankan Airlines ho tahaka ny Emirates
Airlines • Airport • Vaovao • Vaovao Mafana Sri Lanka • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Aprily 16, 2019
Namaky 4 aho
Mpanoratra Alain St.Ange
Amin'ny fiezahana hamadika ny orinasam-panary very ho lasa mahasoa, SriLankan Airlines dia nametraka drafitra stratejika dimy taona. Ny ampahany amin'ny drafitra dia hahita azy ireo manahaka ny mpitarika indostria Emirates, miaraka amina hub hub sy modely tambajotra miteny.
Tao amin'ny fanambarana iray dia nilaza ny SriLankan Airlines:
"SriLankan Airlines dia namolavola drafitra fandraharahana stratejika dimy taona vaovao mandritra ny vanim-potoana 2019-24 miaraka amin'ny tanjona hanovana ny tenany ho vondrona mpitantam-piaramanidina mivelona ara-bola miaraka amin'ny fahitana marobe sy laza malaza manerantany momba ny hatsarana,"
Notohizan'izy ireo fa ny kaompaniam-pirenena dia nanana 'fandraisana anjara lehibe' ho an'ny harinkarena faobe ao Sri Lanka, ao anatin'izany ny fanafarana, fanondranana ary fizahan-tany.
Inona ny drafitra SriLankan Airlines?
Ny drafitra fandraharahana dimy stratejika farany ataon'izy ireo dia misy ny fampandrosoana lehibe ny foiben'i Colombo mba hahatonga azy io ho teboka mampifandray lehibe amin'ny tsena isan-karazany. Nikendry ireo mpandeha mampifandray an'i Afrika, Azia ary Moyen Orient i SriLankan, amin'ny fikasana hitombo lehibe tahaka ny Emirates fiaramanidina mpifaninana aminy.
Amin'ny maha mpikambana ao amin'ny Oneworld azy, SriLankan dia manantena ny hitrandraka ny maha-mpikambana azy ireo mba hampivelatra ny tamba-jotra ho avy. Mifanohitra amin'ny maodelin'ny teboka ankehitriny, dia mikasa ny hiasa amin'ny foibe bebe kokoa izy ireo ary hiresaka modely hampivelarana fotoana vaovao.
Ny drafitra dia hatolotra ny Governemantan'i Sri Lanka hahazoana fankatoavana vetivety.
Làlana vaovao sy sambo
Amin'izao fotoana izao, ny SriLankan Airlines dia miasa miaraka amina fiaramanidina 27 an'ny Airbus. Manokana, ireo dia fiaramanidina fianakaviana A13 320 sy 14 A330. Ao anatin'ny drafitra dimy taona, mikasa ny hisafidy fampidirana andian-tsambo vaovao izay mitondra ny fepetra takian'ny tambajotran-dalan'izy ireo mandroso. Nilaza ihany koa izy ireo fa te-hamerina handamina indray ny fiaramanidina misy azy ireo hanolotra serivisy kilasy fandrosoana mihombo.
Efa nanambara serivisy serivisy dimy isan-kerinandro eo anelanelan'ny Colombo sy Tokyo manomboka ny volana Jolay ny zotram-pitaterana an'habakabaka, mampiasa ny Airbus A330-300s. Raha nohamarinin'ny governemanta ny drafitra, manantena izahay fa hahita fanambarana vaovao maro hafa mandritra ny herinandro ho avy.
Ary koa ny zotra sy ny sambo, dia mamaritra ny drafitra fa:
Ampitomboy ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny centricity-mpanjifa manerana ny zotram-piaramanidina
Mandraisa fomba fanao tsara indrindra hanatsarana ny vokatra
Mitombo ny varotra an-tserasera hahatratra tsena midadasika amin'ny fomba mahomby kokoa
Hatsarao ny fifandraisan'ny mpiasa
Ampiharo ny firafitry ny vidin'ny fifaninanana amin'ny fahatsiarovan-tena bebe kokoa amin'ny orinasa
Ny drafitra dia notarihan'ny Chief Executive Executive Vipula Gunatilleka, izay notendrena ho ao amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'ny tapaky ny taona 2018. Talohan'ny nidirany tao SriLankan, Gunatilleka dia mpikambana ao amin'ny birao ary CFO an'ny TAAG Angola. Tao izy dia niara-niasa akaiky tamin'ny Emirates raha nitantana TAAG izy ireo, ka tsy isalasalana fa mahalala ny hub-ny ary efa niresaka raharaham-barotra sahady.
Mandalo fikorontanana lehibe ity kaompaniam-pitaterana an-tsambo hitadiavam-bola. Nandritra ny sivy volana lasa izay, ny fatiantoka netin'ny mpitatitra dia avo roa heny noho ny fatiantoka $ 135m. Antenaina fa ny drafitra stratejika dimy taona apetraka anio dia hanova ny seranam-piaramanidina amin'ny 2024.
Alain St Ange dia niasa tamin'ny sehatry ny fizahan-tany hatramin'ny 2009. Notendrena ho talen'ny marketing ho an'i Seychelles ny filoha sy ny minisitry ny fizahantany James Michel.
Notendren'ny filoham-pirenena sy ny minisitry ny fizahantany James Michel ho talen'ny marketing ho an'i Seychelles. Rehefa afaka herintaona
Taorian'ny fanompoana nandritra ny herintaona dia nisondrotra tamin'ny toeran'ny CEO an'ny Seychelles Tourism Board izy.
Tamin'ny taona 2012 dia natsangana ny Organisation régionales nosy Ranomasimbe Indianina ary notendrena ho filoham-pirenena voalohany i St Ange.
Nandritra ny fanovana indray ny kabinetra tamin'ny taona 2012 dia notendrena ho minisitry ny fizahantany sy ny kolontsaina i St Ange izay nametra-pialana tamin'ny 28 desambra 2016 mba hitady ny firotsahana ho sekretera jeneralin'ny World Tourism Organization.
Tao amin'ny UNWTO General Assembly tao Chengdu any Shina, olona iray notadiavina ho an'ny "Circuits Speakers" ho an'ny fizahantany sy ny fampandrosoana maharitra dia i Alain St.Ange.
St.Ange no minisitry ny fizahan-tany, sidina sivily, seranan-tsambo ary seranan'i Seychelles teo aloha izay nandao ny asany tamin'ny desambra lasa teo mba hirotsaka hofidina ho sekretera jeneralin'ny UNWTO. Rehefa nesorin'ny fireneny ny firotsahany na ny antontan-taratasiny, andro iray monja talohan'ny fifidianana tany Madrid, dia naneho ny fahalehibiazany tamin'ny naha-mpandahateny azy i Alain St.Ange rehefa nitodika tamim-pahasoavana, fitiavana amam-panahy ary fomba fanao tao amin'ny fivorian'ny UNWTO izy.
Ny lahateny mampihetsi-po nataony dia voarakitra ho iray amin'ireo lahateny fanamarihana tsara indrindra teo amin'ity vondrona iraisam-pirenena UN ity.
Matetika ireo firenena afrikanina dia mahatadidy ny adiresiny Ogandà momba ny East Africa Tourism Platform raha vahiny nasaina izy.
Amin'ny maha minisitry ny fizahantany teo aloha azy dia mpandahateny mahazatra sy malaza i St.Ange ary matetika no hita niatrika forum sy fihaonambe tamin'ny anaran'ny fireneny. Ny fahaizany miteny 'off the cuff' dia hita ho fahaizana tsy fahita firy. Matetika izy no nilaza fa avy amin'ny fony no nitenenany.
Tao Seychelles dia tsaroana tamin'ny lahateny nanamarihana izy tamin'ny fanokafana tamim-pomba ofisialy ny nosy Carnaval International de Victoria rehefa namerina ny tenin'ny hira malaza John Lennon… ”mety hiteny ianao fa mpanonofy aho, fa tsy izaho irery. Indray andro any ianareo rehetra dia hiaraka aminay ary ho tsara kokoa izao tontolo izao ho iray ”. Nivory tao Seychelles ny mpifaninana amin'ny gazety manerantany tamin'io andro io izay nihazakazaka niaraka tamin'ny tenin'i St.Ange izay nanjary lohateny lehibe na aiza na aiza.
St.Ange dia nanolotra ny lahateny ifotony ho an'ny "Fihaonambe fizahan-tany sy raharaham-barotra any Canada"
Seychelles dia ohatra tsara amin'ny fizahan-tany maharitra. Tsy mahagaga noho izany ny fahitana an'i Alain St.Ange tadiavina ho mpandahateny eo amin'ny faritra iraisam-pirenena.
mpikambana ao amin'ny Travelmarketingnetwork.
Ny mpiasa amerikana amerikana tsy voarohirohy izay mahazo COVID dia ao ...
Manomboka ny mpiasan'ny fizahantany Jamaika ny Task Force vaovao ...
Hurtigruten Expeditions dia manolotra Galapagos manokana ...
Mahatsiaro ny mpanorina ny Sandals Resorts International ...
Airbus dia manangana tetik'asa fampitaovana fiaramanidina A320 ao ...
Miverina amin'ny tombony ny Air Astana
Kongresy fiarovana ny tontolo IUCN: maharitra maharitra ...
Tsenan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany fizahan-tany ho an'ny faritra Golfo ...
Ahoana no ahafahan'ny fikambanana fizahan-tany mamporisika haharitra ...
Fepetra fitsangatsanganana ataon'ny firenena sy ny faritra ar ...
Fifamoivoizana ataon'ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina lehibe any Irlandy Miakatra 230%
Fomba ahoana no hanampian'ny hetsika «biby miompy» fiovan'ny toetrandro ...
Lasan'ny taliban vola 12.3 tapitrisa $ sy volamena ny ...
T amoron-dranomasina dimy tsy tokony halahelo mandritra ny fialantsasatra any Seychelles
Nampitandrina ny Amerikanina ny amin'ny fitsangatsanganana rehetra any Russia
Fahasarotana vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt: Mpitsidika Fraport ...
Seychelles sekretera lehibe misahana ny fizahan-tany ...
Aeroflot dia mitaky ny hanaovana vaksiny ny mpanamory fiaramanidina
Noraràn'i Brunei ny fidirana rehetra avy any Indonezia aorian'ny fanafarana ...
Mandràra ny olom-pirenena rehetra tsy vita vaksiny avy any ivelany i Koety ...
May ao: May be ny afo ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
MIANGATRA: firenena 80 ahitana UK, UAE, France, Israel ...
Bahrain Exhibition & Convention Center dia manana ...
Avy aiza marina ny Coronavirus?
Nandeha hidin-trano i Martinique, nilaza tamin'ny mpizahatany mba hiala
IATA: fitomboan'ny karatra an'habakabaka voalohany matanjaka indrindra hatramin'ny ...
Nanainga ny fameperana fivezivezena ho an'ny firenena sasany i Eropa ...
United Airlines: Fiaramanidina fiaramanidina elektrika hiomana ...
Ny Tourism Corporation Bonaire dia miantso ny Dr. Robertico R ...
10% amin'ny fiara 1 miliara ihany no tena azo antoka
Hotely: mitentina 59 miliara dolara ny fidiram-bola amin'ny ...
Noraran'ny Vondrona eropeana ny Amerikanina mpandehandeha
Miantso ny hevitry ny mpitondra manerantany ny fizahan-tany ao Jamaika ...
IATA: Tsy ny hetra no vahaolana amin'ny fitohizan'ny sidina
Etihad Airways dia nandefa sidina nankany Wina, Aotrisy
UE: mandrahona ny ...
Fizahan-tany vaksinina: tsara ve sa ratsy sa tsy miraharaha?
Delta Air Lines mividy fiaramanidina Airbus A30neo 321 hafa
Ny fandaniana fizahan-tany any Amerika Avaratra dia nidina tamin'ny 74.1% ...
Victoria House Resort & Spa, Belize Manomboka Vaovao ...
Horohoron-tany mahery tany Filipina
Horohoron-tany mahery vaika no manakorontana ny Saikinosin'i Alaska
Maty, naratra, simba voalaza fa horohoron-tany lehibe ...
Fandringanana ireo mpizahatany ao Torkia mamono olona any ...
Iza amin'ireo valan-javaboary amerikana no tena ankafizin'ny fianakaviana?
The Mizoram Vaovao: Toerana fizahan-tany maharitra azo antoka
Guam tsy misy mpizahatany Koreana no tantara ankehitriny
Nanambara ny sidina vaovao any Kolombia, Meksika ary Etazonia ny Amerikanina ...
Ny trano fisakafoanana, hotely ary trano fisotroana any Delhi dia mahazo fiatoana amin'ny hetra